जनतालाई चुनावी मुद्दा ठूलो कि मुद्रा ? – NamoBuddha Khabar
जनतालाई चुनावी मुद्दा ठूलो कि मुद्रा ?
आइतबार, मंसिर १०, २०७४ | १४:४५:५१ |
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको पहिलो चरणको चुनाव आइतबार सम्पन्न भएको छ । अहिले देश मात्र नभई विदेशमा समेत प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको चुनावको माहोल तातिरहेको छ । नेपालमा चुनावको प्रभाव ठिकै हो तर विदेश बस्ने नेपालीहरूमा झन् बढी प्रभावित बनेका छन् । सामाजिक सञ्जाल चुनावमय विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले गरेका छन्, विडम्बना विदेशमा बस्ने लाखौं नेपाली मतदानबाट बञ्चित छन् । नेपालमा बस्ने केही नेपालीहरू उम्मेदवार बनेका व्यक्तिबाट मुद्रा (पैसा) लिनमा व्यस्त छन् भने विदेशमा बस्ने नेपालीहरू आफूनिकट दल र तिनका उम्मेदवारलाई चुनाव खर्च जुटाउन व्यस्त छन् । यी दुवै क्रियाकलाप नेपाल र नेपालीको भविष्यको लागि खतरनाक हुन् । किनकी नेपालमा बस्ने मतदाता र विदेशमा बस्ने मतदाताले मुद्रा (पैसा) लाई भन्दा मुद्दाप्रति केन्द्रित हुन जरुरी थियो र छ पनि । कारण दुवैले आफूलाई सम्बोधन गर्ने मुद्दा ल्याउनलाई गतिविधि केन्द्रित गर्नुपर्नेमा मुद्राकेन्द्रित भएका छन् ।
विदेशमा बस्ने नेपालीले पनि मुद्दा तथा सवालमा बहस र छलफल चलाउनुपर्ने आवश्यकता थियो । तर त्यो भएको देखिएन । आफू देशको परिस्थितिले गर्दाखेरी परिवारसँग छुटिएर पराईको देशमा रगत, पसिना र आँशु बगाउनुपर्ने प्रथाको अन्त्य गर्छु भनेर घोषणापत्रमा उल्लेख गर्न दवाव दिन आवश्यक छ । अर्को मुद्दा विदेशमा बस्ने नेपालीले आफ्नो मताधिकार प्रयोग विदेशमै बसेर पनि गर्न पाउनुपर्ने प्रावधान ल्याउनेछु भन्ने खालका मुद्दा दलको र उम्मेदवारको घोषणापत्रमा समेट्न दवाव दिन जरुरी थियो । तर मुद्दालाई लत्याएर मुद्रा केन्द्रित भए, यो दुःखलाग्दो कुरा हो ।
अब नेपालमा रहेका मतदाता अर्थात जनताको कुरा गरौं । आफूलाई झुटो आश्वासन नभई देशको विकास, शिक्षा–दिक्षा, स्वास्थ्य तथा भरणपोषण गर्ने खालको मुद्दा ल्याउनेलाई छान्नुपर्दथ्यो । नभए दल र तिनका उम्मेदवारलाई घोषणपत्रमा उल्लेख गराउन दवाव दिन एउटा अभियान चलाउनुपथ्र्यो । तर दुःखलाग्दो जसले एकदिन केही खानापिना खुवाउँछ र मुद्रा (पैसा) हातमा थमाउँछ उसलाई मतदान गर्ने प्रथा नै बसालिरहेका छन् । अब मतदानको अर्थ पनि फेर्न जरुरी बनाए । आफ्नो मत ‘दान’ गर्ने भएकोले मतदान भनिएको हो तर यहाँ मतलाई दान होइन विक्री गर्ने प्रथा सदियौंदेखि जकडिदै आए । नेपाल र नेपालीलाई आफ्नो देश, सन्तति र आफूलाई केही सुखद् दिन ल्याउने व्यक्तिलाई मतदान गर्नुको साटो मत विक्री गर्दै आए अनि अहिले देशमा भइरहेको चुनावमा पनि यो परम्परालाई जनताले निरन्तरता दिए र केही दिनमा अवश्य दिनेछ ।
लामो समयदेखि कुशासनको दुष्चक्रमा रहेको देश र हामी नेपालीलाई सुशासनको जरुरी छ । नेपालमा भईरहेको राजनीतिक तथा संस्थागत भ्रष्टाचारको अन्त्य नयाँ नेपालमा हुन आवश्यक छ । विकसित देशको व्यवस्था देखेको मात्र होइन, अनुभूत पनि गरेका छन् नेपालीले तर आफ्नो देशको विकास कहिल्यै चाहेन किनकी जहिले पनि उही प्रवृत्ति दोहो¥याईरहे मतदाता र नेता दुवैले । दुवैले परिवर्तन चाहनुपर्छ । परिवर्तन चुनावपछि होइन चुनावदेखि नै चाहनुप¥यो । देशको परिवर्तन हुनलाई आफ्नो पुरानो प्रवृत्तिलाई पनि परिवर्तन गर्नुप¥यो, आफू पनि सकारात्मक र प्रगतिशील परिवर्तन हुनुप¥यो । सम्भव छ नेपाल र नेपालीको समृद्धि, तर दुवैले गर्नुभएन मत खरिद र विक्री । मुलुकको राजनीतिमा नयाँ पात्राहरूको प्रवेश र त्यसलाई सहर्ष स्वीकार्नु नेपालको दूरदशालाई स्वीकार्नु हो । यसबाट सचेत बनौं ।
एमसीसी प्रभाव !–‘अमेरिकी सेना भित्र्याउने’ १० बुँदे प्रस्तावित सम्झौताको मस्यौदा सार्वजनिक भएको खुलासा
सम्मानजनक ढंगले गठबन्धन हुँदै भएन,अब वाम एकता आवश्यक छ : खनाल–नेता नेकपा एस
तेमाल गाउँ कार्यपालिका सदस्य निर्वाचनमा काँग्रेस–माओवादी गठबन्धनको जित
सहकार्यको सन्देशसाथ काठमाडौंका मेयर बालेन्द्रले थाले शीर्ष नेताहरुसँग भेटघाट